Isobho phezu kwamanzi efana akubona bonke, ngisho noma kuyinto Ukudla nesitsha enempilo kakhulu. Ikakhulukazi awahloniphi lezi izitsha amadoda asetshenziswa ngubani ukuhlola khona kwasemini inyama kuwo. Ungakhetha kanjani ukhetho Ukuthanda izinto zika wonke amalungu omndeni nawo acatshangelwe? Lokhu kungenziwa uma isobho umpheki esekelwe ngibhema inkukhu amaphiko. He jika mnene futhi benawo uhlobo ukunambitheka enamandla egcwele. Singasho kugcwale umlomo ukuthi kuyinkambo kuqala neze kunabayeni okuphekwe lonke inkukhu izidumbu. Ngaphezu kwalokho, kukhona ngisho inzuzo enkulu - amaphiko angasebenza futhi njengendlela umhlobiso isobho siphelile, njengoba abaningi bathanda ukuziluma amathambo ngenkathi bedla.
A option ezinhle ipea isobho enamaphiko ngabhema. Singakanani isikhathi udinga ukupheka? Njengoba lisetshenziswe isisekelo noma ngibhema amaphiko ngibhema kudingeka hhayi ningi than 20 imizuzu. A inzuzo elikhulu ungaphakathi yokuthi in umhluzi, ungakwazi ukwengeza noma iyiphi izithako - amazambane, imifino ehlukahlukene, okusanhlamvu kanye nokunye.
Pea isobho enamaphiko ngibhema muhle ikakhulukazi ebusika, ngoba eqotho futhi ukufudumala. Lapho isidlo iphekwe, kufanele inikezelwe itafula ukhilimu omuncu noma obuncane ibhotela (singazange sande!) - lokhu kuzokwenza ukunambitheka ngokucace nakakhulu futhi ecebile. Pea isobho enamaphiko ngibhema iresiphi okwethulwa kulesi sihloko, it iphekwe kakhulu ukumane, futhi ngaleyo ndlela kusikisela ukuba khona imikhiqizo zamanani aphansi elula kuphela. Kulokhu, kubalulekile isidlo sokuqala futhi ewusizo kakhulu njengoba uphizi sihlanganisa eziningi izakhi. Okokuqala, iqukethe eziningi calcium, ngakho ngeke abe nomthelela omuhle amazinyo, izinzipho bone, futhi bazonikezwa okwesula umzimba compounds eziyingozi. Njengoba kushiwo ngenhla, lolu hlobo imidumba ashisayo kunomphumela sifudumale futhi anganikeza umuzwa isikhathi eside ekugcwaleni.
Indlela ukupheka ipea isobho enamaphiko ngibhema?
Ukuze besifazane abaningi inzuzo kungaba iqiniso lokuthi ipea has eziphansi kuqhathaniswa nezinye okusanhlamvu, ngisho pasta. Ngaphezu kwalokho, it has a ukuphila eshalofini eside nokuwa kakhulu ngaphandle. Ukuze ukupheka ebhodweni ipea isobho, udinga kancane kakhulu.
3 amalitha amanzi;
ingilazi uphizi owomile;
3-4 amazambane aphakathi;
3-4 ngibhema inkukhu amaphiko
noma yikuphi okuluhlaza kweqembu ezincane (isib coriander kanye parsley);
amaqatha ambalwa isinkwa noma isinkwa esimhlophe;
kancane ibhotela kanye / noma amafutha yemifino;
iyiphi isinongo usawoti.
Ukuze ukupheka ipea isobho enamaphiko ngibhema ngokushesha, futhi ukungacabangi isikhathi ukupheka, kungcono uthenge uphizi okuhlukene. Kumele wageza ngokucophelela, bese ugcwalisa ngamanzi ahlanzekile futhi awavumi ukuba elicibilikile 3-4 amahora. Emva kwalesi sikhathi, amanzi kumele ngikhandlekile engqondweni, ube net wafaka pan on isitofu kuhlanganisiwe.
Umhluzi ukuze imibala ehlukene ezikhangayo, amaphiko kudingeka ukubeka kuphela emva amazambane uzolunga. Zonke kuzothatha cishe imizuzu engu-10-15. Ngalesi sikhathi kudingeka silungiselele Yiqiniso zazharku wakho wokuqala, okuyinto yengezwe kanye amaphiko.
Anyanisi kanye izaqathi kuthiwa imibengo ngesimo cubes amancane gazinga ku esincane uwoyela (ibhotela noma nemifino - lokhu kukhetha ekutheni yimalini okunama-kilojoule amaningi dish ofuna ukupheka).
A kwalokho nice
Phakathi zokupheka, ungenza futhi ugcwalise iqanda-lemon ezokwenza ukudla kunambitheke acebile. Ukuze silungiselele, udinga amaqanda amabili kanye umpe mayelana lukalamula. Kuyinto enhle uhlanganise lezi izithako, kancane eshaywa futhi kancane uthele kule isobho abilayo. Noma yimuphi izinongo (emnyama obomvu, leek futhi t. D.), Kanye amakhambi fresh (cilantro, parsley m. N.) Kungasetshenziswa.
Pea isobho enamaphiko ngibhema muhle ikakhulu nge crackers noma ubhontshisi. Ukuze abenze, thatha tincetu isinkwa esimhlophe, uthathe cubes ezinkulu kanye abakhwabanisi epanini noma kuhhavini. Ngemva kwalokho, isidlo ilungele ukukhonza.
Indlela Yokuthola Multivarki
Kungenzeka yini ukupheka ipea isobho nge ngibhema amaphiko multivarka? Yiqiniso, lokhu kungenzeka, futhi umzamo omkhulu ayidingekile. Uzodinga lokhu okulandelayo.
350 amagremu ngibhema amaphiko
ozikhethela - yimuphi pasta;
pepper kanye nosawoti.
Inqubo ukupheka iwukuba bonke onobuhle multivarok okufanayo. Inkukhu amaphiko kumele kuqala kube gazinga kancane ikumodi ezifanele, bese kufanele ubeke sibe yimichilo noma amazambane Diced futhi izaqathe oqoshiwe. Zonke izithako kumele wawugcwalisa ngamanzi, ngemva kwalokho bonke lid ulungiselela "isobho" Imodi noma "eqeda" amahora cishe unyaka nesigamu.
Uma isidlo usulungile, yengezwe imifino fresh. Uma ufuna ukwengeza pasta, kufanele wazibeka isobho imizuzu engu-15 ngaphambi kokuphela ukupheka. Ngokufanayo, ungakwazi ukwengeza noma iyiphi iqolo. Kungakhathaliseki nalokho izithako uthanda ukupheka ipea isobho enamaphiko ngibhema, igxathu negxathu iresiphi okuyinto letinikwe lapha ngenhla, kuvela kakhulu. Wings kungaba hlela phezu kwezitsha noma nokunqunywa ngokuphelele kuzo inyama bese uyifaka kwi-dish. Ngaphezu kwalokho, kungenzeka esebenzisa blender ukwenza isobho nokondla ku-croutons.
Banosh: iresiphi multivarka. Banosh nge ushizi
Indlela Fry inkukhu. izindlela eziningana
Indlela yokwenza "Gedlibzhe": iresiphi nokupheka ongakhetha ukudla
Ingulube izimbambo kuhhavini - iresiphi for the holiday
A isinkwa esimnandi Pita isinkwa nge isanqante Korean nezinye ofakwe
Irina Melnik: Biography futhi Filmography
E-ncwadi Wexler Incwadi T7205: izici kanye nokubuyekeza
Kungani Epiphany waqanjwa igama elithi the Hlakaniphile? Photo kanye biography of Epiphanius the Hlakaniphile
Ukwelapha calendulakuva imbali. izakhiwo ezisebenzisekayo Izimo
Isiqhumane somlilo emotweni esivela ekukhanyeni kwegwayi. I-Car Ceramic Fan Heater: Inani